Triveni Online - Page 30 of 432 - News of Nepal
4 weeks ago	JyotishMantra 0
विदेशी मुद्राको विनिमयदर : आज कुन देशको मुल्य कति छ ? हेर्नुहोस् …
काठमाडौँ । आज मंगलबार अमेरिकी डलरसहित प्राय सबै देशको मुल्य ओरालो लागेको छ। आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १ सय ९ रुपैयाँ ३५ पैसा छ भने बिक्रिदर मूल्य १ सय ९ रुपैयाँ ९५ पैसा रहेको छ। त्यस्तै युके पाउण्ड १ को खरिददर १ सय ४५ रुपैयाँ ८ पैसा, १ सय …
आजकाे मौसम : पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदलीको सम्भावना
काठमाण्डौ – मंगलबार काठमाण्डौसहित देशका पहाडी भेगमा आशिंकदेखि सामान्य बद्लीको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । प्रिमनसुनी समय भएकाले बेलुकीपख भने मेघगर्जनसहित पानी पर्ने सम्भावना रहेको महाशाखाका मौसमविद् समिर श्रेष्ठले बताउनुभयो । स्थानीय वायुको प्रभावका कारण सोमबार दिउँसो पनि काठमाण्डौ उपत्यकालगायतका विभिन्न ठाउँमा पानी परेको थियो …
आज मंगलबार अहिलेसम्मकै दुर्लभ योगले यी राशि बने मालामाल : राशिफल/२०७५ साल चैत्र ०५ गते मंगलबार
वास्तुशास्त्र अनुसार परिवारका सदस्य यदि बिरामी र तनावमा भइरहन्छन् भने यसको कारण घरको मुख्यद्वार पनि हुनसक्छ । मुख्यद्वारसँग जोडिएका वास्तु दोषका कारण घरका सदस्य शारिरिक, मानसिक र आर्थिक रुपमा विचलित हुन्छन् । वास्तुशास्त्रका विभिन्न ग्रन्थमा घरको मुख्यद्वारसँग सम्बन्धित विशेष जानकारी दिइएको हुन्छ जसबारे ध्यान दिँदा तनाव, रोग र अनावश्यक खर्चबाट …
अक्षरबाट हेर्नुस स्वभाब भाग्य र भबिस्य ! तपाइको नाम कुन अक्षरबाट सुरु भएको हो ? शेयर गर्नुहोस !
प्राय मानिस आफ्नो नाम सधै प्यारो मान्‍ने गरिन्छ।उनीहरु आफ्नो नामको अक्षरलाई समेत बढी बढावा दिने गरेका छन्। प्राचीन कालमा पनि मानिसले नामकैको कारणबाट चुनौतीपूर्ण कार्य गर्दै आएको छ। तर संसारमा ज्योतिष बिज्ञानले मानिसको नामबाट मनोबिज्ञान पढ्ने पद्धतिको विकास गरिसकेको छ। मानिसले अब आफ्नो नामको अक्षरबाट स्वभाव थाहा पाउन सक्छन्। ती …
दु:खद खबर:रोल्पाबाट दाङ आउँदै गरेको बस दुर्घटना हुँदा एकको मृत्यु, २८ घाईते
दु:खद खबर मानिसको जिन्दगी यो मेरो त्यो मेरो भन्यो तर यक्दिन जस्तो आयको तेस्तै जानू प्रने सुरेश श्रेष्ठ दाङ । दाङमा बस दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने २८ घाईते भएका छन् । सोमबार दिउँसो तीन बजेको समयमा दाङ घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं १३ घोराही होलेरी सडक खण्डमा …
हेर्नुहोस आजको राशिफल, मिति २०७५ साल चैत ५ गते मंगलबार
4 weeks ago	Rashifal 0
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) रमाइलो जमघटका बीच स्वादिष्ट भोजनको आनन्द पाइएला । विगतको सफलताले थप काम गर्न हौसला मिल्नेछ । अभिप्रेरित गर्नेहरू प्रशस्तै भेटिनेछन् । मनग्ये धन आर्जन होला । विछोडिएका परिवारजनसँग भेटघाट हुनेछ । विगतका कमीकमजोरीलाई पनि सुधार गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । …
यहाँ हजारौं पर्यटकहरुको वर्षै पिच्छे मृत्यु हुने गर्छ ! विश्वका सबै भन्दा खतरनाक पर्यटकीय स्थल यी हुन् !
4 weeks ago	Rochak 0
सुन्दर ठाउँमा घुम्न जो-कोहिलाई मन पर्छ। तर केहिलाई भने सुन्दर मात्र नभई खतरनाक ठाउँमा घुम्न मन पर्छ। आफ्नो घुमाई रोमान्चक बनाउनको लागि मानिसहरु हरेक ठाउँमा पुग्ने गर्छन्। यस्तै विश्वका केहि खतरनाक पर्यटकीय स्थालको बारेमा चर्चा यस लेखमा बताउने छौँ। एलीफेन्ट किंगडम, थाइल्याण्ड यस पर्यटकीय स्थलमा गोहीहरुको ठूलो संख्या रहेको छ। …
ह्याप्पी बर्थ डे, नायिका आँचल शर्मा २५ वर्ष लागिन्
काठमाडौं, ५ चैत । नायिका आँचल शर्माको आज जन्मदिन । सन् १९९५ मार्च १९ मा आँचलको जन्म काठमाडौंमा भएको हो । यस आधारमा उनी आफ्नो २५ औं जन्मदिन मनाउँदैछिन् । कहीँ कतै उनको जन्म १८ मार्चमा भएको भन्ने पनि लेखेको पाइन्छ । तर, आँचलले आज साथीभाइसँग बर्थ डे मनाउने बताइएको …
जय पाथीभरा माता कल्याण गर . भोलीको राशिफल हेरेर मात्र सुत्नु होस् ।